किन सम्झिदैनौ ?
editor — Mon, 06/26/2017 - 00:04
वर्षा हुँदा म त यता कति सम्झिराख्छु
हो रातको नीरवतासँग सम्झिराख्छु
पर्दैन रात कि त्यता किन सम्झिदैनौ ?
बर्सिन्न मेघ कि त्यता किन सम्झिदैनौ ?
editor — Sun, 06/25/2017 - 23:40
गोविन्दे कोठामा धुम्धुम्ती बसेको छ । खासमा नागरिकताको उसको नाम गोविन्द कटुवाल हो । धेरैअघि एसएलसीसम्म मात्रै पढेको । उहिल्यैको पढाइ । न जागिर खायो । न कुनै गतिलो काम नै गर्यो । जवानीमा रल्लिँदै हिँड्यो । अहिले बेबहारले थिचेर उमेर नहुँदै बूढो देखिएको छ ।
ननिको छ –गोविन्दे । गाउँमा अँझै हुने नहुने सबै काम गर्छ । जवनीमा आँखा देखेन । अहिले जवानी घर्किन थाल्दै बूढो देखिएको छ । साह्रै चञ्चल छ । केही न केही उपध्रो गरिरहनु पर्ने ।
जिन्दगी एउटा विश्वास हो
कोमलनयन — Sun, 06/25/2017 - 12:06
हृदय त्यसको आभास हो
हरदम यहीं सोच आउँछ,
त्यो उनको सुवास हो
लघुकथाका बारेमा अलिकति जानकारी
HomSuvedi — Sun, 06/25/2017 - 03:20
यसलाई साहित्यको पछिल्लो विकसित नयाँ रुप मानिन्छ । अनेक परिभाषाहरुबाट यसको परिभाषा गरिएको छ । यसबारे निकै शोधखोजहरू भएका छन् । निकै कार्यपत्र, निकै शोधपत्र र निकै शोधग्रन्थ पनि लेखिएका छन् ।
धेरैले धेरै प्रकारले आफ्नै शैली र चतुराइ वा शैली र विचारको कुशलतालाई उपयोग गरेर यसको सम्भव भएसम्मको यथार्थ चिनारी दिने काम गरेको देखिन्छ ।
त्यो अव्यक्त पीडा पोखिदैन
editor — Sun, 06/25/2017 - 03:17
जीवित र भौतिक दुई कुरामा, मानवको सोचाइ फरक हुन्छ । मानव सव्यतामा विवाहपछिको घरबारको सुरुवात हुन्छ, जीवित अर्थात सन्तति छोरा, छोरी वा तेस्रो लिङ्गि जे भए नि गर्भमा रहेदेखि नै आमाको सकस र पीडा शुरु हुन्छ । सुत्केरी पीडाको त बखान गर्नु नै बेकार छ, त्यसैले माताको स्थान कुनैले पनि लिन सक्दैनन । बच्चाको कारण ज्यान गुमाएरको थुप्रै घट्ना छन् विश्वमा, अस्पतालको सुविधा भए देखि पीडा घटेको छ र मृत्यु दरमा कमी आएको छ तर शून्य भएको छैन । यसरी जन्माएर कयौं रात अनिदो र कष्टमै बालक हुर्काउनु पर्छ, आमाको काखमा कतिमायां हुन्छ भन्ने कुरा हामी सबै मानवलाई थाहा छ तर त्यो काँख र ओतप्रति हामीले गर्ने कर्तव्य भने फरक छ, विभेद छ ।
मनमा केही गर्छु भन्ने(मुक्तक)
छोरीलाई पढाउन पठाऔँ
तिम्रो याद तेल बनि मन जल्ने भो
थारूहरूको दसैँ सुकरात